WAXAAN BACRIMINNO CIIDDA LEH PHACELIA - SOOSAARKA DALAGGA
Phacelia waxaa iska leh qoyska biyaha (hydrophilic) waana warshad sannadle ah oo hal-jarjaran ah. Phacelia waxaa loo tixgeliyaa inay tahay digada cagaaran ee ugu fiican, iyo sidoo kale dhaqanka cagaarka ah iyo dhaqanka malab.
Phacelia waxay u qalantaa dareen gaar ah sababtoo ah koritaankeeda aad u deg deg ah, taas oo keenta tiro badan oo cagaaran. Maadaama ay caleenta jilicsan ee phacelia si dhakhso ah u jajabiso, waxay u adeegtaa sida bacriminta nitrogen ee wanaagsan ee ciidda.
Ujeedada ugu weyn ee phacelia waa bacrimin. Sidaa darteed, inta badan, waxaa loo isticmaalaa sida digada cagaaran, taas oo ah, warshad dhaqdhaqaaqa ugu weyn waa in bacriminta loogu talagalay ciidda, sii kordhinta beeraha kale ee cagaaran.
Ka dib qallafsanaanta ciidda, dabeecadda oo dhan ee phacelia waxaa loo beddelaa bacriminta si sahlan oo loo adeegsan karo, iyo ciidda lafteedu waxay ka buuxsantaa humus iyo wax organic. Laga bilaabo hal bil iyo badh phacelia ah oo ku saabsan 300 kiilo garaam oo cagaaran ah boqolkiiba boqol, kaas oo u dhigma nuugista ciidda, samaynta 300 kiilo oo digada ah. Iyadoo ku saleysan arintan, hal xagaaga waxaad ka heli kartaa ilaa 4 dalool dalagga beeraha hal dhul oo dhul ah.
Waa xaddidan oo u ogolaan karta wakhti kasta oo ka madax banaan xilliga cimilada (iyo xilliga ugu wanaagsani waa xilliga goosashada ka dib), adigoon codsanin bacriminta kale iyo digada, si aad u abuurto qalab tayo sare leh oo ka sameysan ciidda cufan ee adag, taas oo ah natiijada aad ka heli karto waxsoosaar sarraysa ilaa afarta sano ee soo socota iyada oo aan la isticmaalin waxyaabo wax lagu daray iyo Bacriminta.
Marka lagu daro hawlaha bacarinimada phacelia, waxaa loo isticmaalaa sida dalagga xoolaha ee xayawaanka beeraha, iyo sifooyinka sare ee nafaqada wuxuu si buuxda u bedelayaa oo dhaafaa isku darka kale. Sababtoo ah heerka sare ee nafaqooyinka iyo nafaqooyinka laftiisa, dhirta ayaa saameyn aad u wanaagsan ku leh caafimaadka guud ee xayawaanka guud ahaan: waxay ku dhacaan jirrooyin yar waxayna u muuqdaan inay miisaan culus helaan.
Tan iyo tan phacelia waa dalag jilicsan, manka wanaagsan iyo dhirta malabku waxay gacan ka geystaan ​​hagaajinta mira-dhalinta iyo pollination. Beerallarrada ayaa la jiidaya ubaxyada buluugga ah iyo waxsoosaarka hal hektar ilaa 300 kiiloogaraam oo malab ah, iyo xaalado aad u fiican oo dalaggu gaari karo hal tuun.
Haddii aan isbarbardhigeyno phacelia leh dhaqamada kale, ka dibna: buckwheat wuxuu ku siinayaa ilaa 70 kiiloogar hal hektar, iyo iniin khardal ah 100 kiilo oo malab ah. Bees "shaqeyn" leh phacelia xitaa waqtiyada aan la uruurin - laga bilaabo bilawga guga ilaa dhammaadka dayrta, subaxii hore ilaa galabtii dambe.
Marka lagu daro dhammaan faa'iidooyinka ka soo baxa qallafsanaanta phacelia (bacriminta aadka u wanaagsan ee dhulka), beerashada dhirta ee ciidda gaar ah wuxuu keenaa faa'iidooyin badan.
Phacelia waxay leedahay nidaam xidid oo wanaagsan. Sidaa darteed, xididkiisu wuxuu u wareegaa dhulka ilaa 20 cm inta lagu jiro mudada oo dhan ee horumarinta mass cagaaran. Sababtan darted, carrada waa la daboolay si dhab ah habaysan. Dhammaan carrada adag, sida, tusaale ahaan, dhoobo, noqdaan kuwo dabacsan oo iftiin leh, ayaa lagu daraa hawada. Tani, marka hore, waxay leedahay saameyn aad u wanaagsan on koritaanka dhirta, Bisaylkiisa ee miro, digriiga iyo berry.
Jiilaalka ka dib, phacelia waxay ka ilaalinaysaa ciidda dabaysha iyo nabaad guurka biyaha, waxay uruurisaa qoyaan waxayna uga digaan abaarta.
Phacelia waxay ku kori kartaa noocyada kala duwan ee carrada, maadaama ay u hagaajinayso nafteeda iyo hagaajinta, dareen kasta, waa. Wuxuu si dhakhso ah u koraa oo wuxuu sameeyaa tiro badan oo cagaaran. Kala duwanaanta carrada waxaa lagu sharraxayaa sida aan qabin ee geedka; waxay ku kori kartaa xayawaanka saboolka ah iyo carrada dhagaxa. Waxay ku jirtaa 5-6 usbuuc ka dib markaad beertid. Phacelia - warshad malab wanaagsan.
Waxay leedahay caleemo qumman oo wanaagsan, taas oo si dhakhso ah u jajabisay oo u adeega bacriminta nitrogenous fiican.
Waxay leedahay phacelia iska caabida qabow - dayrta, waxay si ammaan ah u dulqaadan kartaa dhaxan hoos u -10 ° C, sidaas darteed waxay u baahan tahay in la beeray ku dhowaad isla markiiba ka dib barafka dhalaalay iyo boodhka ciidda.
Phacelia - waa fiyuus fiican. Waa midka ugu fiican, taas oo ah wakiilka daweynta dabiiciga ah ee carrada iyo deegaanka. Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee phacelia waxaa ka mid ah:
Muuqaalka carrada, maadaama uu isbeddelayo heerkulka acidity, samaynta ciidda dhexdhexaadka ah. Tani, marka hore, ma aha oo keliya inaad u korodho tiro badan oo dalagyo kala duwan oo ka mid ah aag gaar ah, laakiin sidoo kale waxay ka caawisaa in laga takhaluso haramaha "qarniyaal qarniyaal" ah, taas oo inta badan ku koraan carrada acidic.
Nectar, oo ku jirta xaddiyo ku filan phacelia, waxay soo jiidataa noocyo kala duwan oo ka mid ah waxyaaba soo jiidashada, kuwaas oo si buuxda u baabi'aya cayayaanka: qoryaha, caleen, geedka tufaaxa, iwm.
Nematodes Locems, wireworms ka baxaan sariiraha, sida u dhowaanshaha phacelia waa wax aan fiicneyn.
Wuxuu ka digayaa dhirta ka hortaga cudurada bakteeriyada fayraska.
Marka lagu qaso digirta inta lagu guda jiro beerashada, phacelia waxay si weyn u yareyneysaa tirada weevils nodule, aphids, weevil pea, iwm.
Ma jiraan wax cillado cad ah oo ku saabsan phacelia, laakiin waa inaad si taxadar leh u tixgelisaa habka kala-jarista ee hadhaaga dhirta.
Nidaamka kala-jajabinta iyo qummanaanta wuxuu dhacayaa kaliya haddii ay jirto qadar ku filan qoyaanka ciidda. Sidaa darteed, digada cagaaran waxay noqon doontaa mid waxtar leh iyada oo aan loo baahnayn waraabin dheeraad ah oo keliya xaaladaha ku habboon qallajinta.
Midnimada ee phacelia waa in ay noqon kartaa horudhaca of ku dhowaad dhaqan kasta oo khudradeed. Waxay leedahay awood ay ku koraan meelaha "khatarta ah" beeraha, iyagoo siinaya miro fiican oo laga bilaabo barafka ilaa barafka. Waxa kale oo aad ku beeri kartaa ka hor xilliga qaboobaha, laakiin ugu fiican ee dhan - guga hore. Waxaad ku beeran kartaa ilaa 4 jeer xilli ciyaareed, sida phacelia uu leeyahay xilli gaaban oo sii kordheysa.
Kama welweli kartid koritaanka saxda ah ee isku dhafka leh dalagyada kale ee sii kordhaya ee quudiya, sida ay u socoto heer isku mid ah sida kobaca caadiga ah ee geedka. Iyo isku dar ah ee phacelia leh digirta, waxay siinaysaa dhalidda weyn ee nafaqooyinka iyo nafaqooyinka.
Under cover of phacelia, geedo of kaabajka, yaanyada iyo qajaarka lagu beeray karo, maadaama ay qaadan doonaa xidid iyo gaadho ee horumarka iyo koritaanka ee seedling isku mid ah oo koraa on sariirta qaawan. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa sida mulch u dhexeeya saf ah baradho. Self-seeding kuma dhacdo dhaqanka xiga ka dib marka la baabi'iyo.
Si loo soosaaro phacelia, waxay noqon doontaa mid ku filan in la dabciyo ciidda leh warshad ama cutter wadaag ah. Tani waa hab aad u wanaagsan oo lagu kobcin karo dhulka, taas oo kordhisa bacriminta carrada waxayna ilaalisaa xoogga beerta. Bacriminta dabiiciga ah waxaa loo isticmaali karaa sidii loo kordhin lahaa wax soo saarka. Wanaag-Humus, iyo sidoo kale diyaarinta wax-ku-ool ah oo ku-ool ah.
Laakiin guud ahaan, Phacelia waa mid aan qabyo ahayn waxayna ku koraan carrada carrada iyo ciidda kala duwan. Haddii aad rabto inaad hesho natiijada ugu wanaagsan iyo soo-saarka beeraha ee phacelia waa in la sameeyaa laga bilaabo Julaay ilaa Agoosto. Meelaha safka ah waa inay ahaadaan 12-14 cm, qoto dheeraana waa inay ahaataa 1 illaa 3 cm. 120 g halkii mitir oo laba jibbaaran ayaa loo tixgelin doonaa heerka abuurka.
Tan iyo geedka waa qabow u adkaysta, waxay u adkeysan kartaa dabacsan qabow ilaa -10 ° C.
Marka lagu daro sifooyinka sare ee qabow u adkaysta, phacelia sidoo kale waa warshad abaarta u adkaysata. Sidaa darteed, qoyaanku ma ciyaaro kaalin gaar ah koritaanka iyo horumarinta warshadda. Oo weliba, sida geedka kasta, waxaa haboon in la siiyo qoyaan ku filan horumarka iyo horumarka degdegga ah ee heerka ugu dambeeya ee koritaanka.
Dhamaan sifooyinka geedka sababtoo ah awooda lagu korin karo phacelia meelo khafiif ah. Waa shey-dulqaad leh, oo sidaas darteed si weyn u koraayo xitaa jaahilnimada iftiin ka yar cawska geedaha.
Ka dib xilli weyn iyo beergooyska laftiisa, waxaa lagama maarmaan ah in la bilaabo nadiifinta "geedka kadib". Waxay ka bilowdaa marxaladda duxda, taas oo ah qiyaastii 7-8 usbuuc laga bilaabo beeridda hore.
Nadiifinta waa la dhammeeyaa bilawga ubaxa dhirta, tan iyo inta nafaqada iyo nafaqadu si weyn u yareeyaan. Waxaa lagama maarmaan ah in la yareeyo phacelia oo leh beeriye ama Fokin ee loo yaqaan 'Fokin's planer-cutter, waxaa lagama maarmaan ah in la horgeeyo xal diyaar ah EM.
Daaweynta ee phacelia oo leh diyaargarucyada noocan oo kale ah waxay si aad ah u dardar galinaysaa hannaanka halsano horeyna u abuuray shuruudo dheeri ah oo microbiological ah, taas oo ah, taas oo iyaduna horseedaysa kobcinta ciidda leh nafaqooyinka iyo maadooyin faa'iido leh oo kala duwan.